China Abavelisi belebheli yokuDlulisa ubushushu kunye nabathengisi | Eco Ubomi
Igama lemveliso: Ilebheli yokuDlulisa uBushushu
Izinto eziphambili Abicah kunye neFilimu yokuKhutshwa kwePET
Amalaphu esebenzayo: Ingubo eqhelekileyo kunye ne-High-elasticity fabric
Ingcaciso: Elungiselelweyo Ubungakanani
Hlamba @ 40 ℃: Egqwesileyo
Uvavanyo lokuhlamba: Ngaphezulu kwamaxesha ama-20 (imizuzu engama-30 / ixesha)
Intlawulo: L / C, T / T, iKhadi letyala, i-Western Union, i-PayPal (ye-oda encinci)
Zithini iilebheli zokudlulisa ubushushu?
Iilebheli zokudlulisa ubushushu (ekwabizwa ngokuba yi-HEAT SEAL kunye ne-TAG PHANTSI) yenye yeelebheli ezaziwayo kwimarike yengubo. Ukusuka kwimibhalo elula yenkampu ngokusebenzisa iilebhile ezinamagama, iimpahla zokudada, iimbaleki, iimpahla zokudanisa, iimpahla zangaphantsi, iimpahla zabantwana ukuya kwileyibhile yophawu, ukuhanjiswa kobushushu kuye kwaba yimveliso "ndiyayifuna ngoku".
Yinkqubo ebeka uyilo kwinto ethile ngokusebenzisa ubushushu noxinzelelo. Rhoqo uyilo lushicilelwa ephepheni okanye kwinto yokuphatha eyenziweyo emva koko isetyenziswe kwinto oyifunayo, ikakhulu iimveliso zelaphu eziza kudibana ngqo nolusu, ezinje ngezambatho zangaphantsi, iimpahla zokudada, ezemidlalo kunye nezikipa.
Iilebheli zokudlulisa ubushushu zihlala ixesha elide kwaye zinokumelana nemijikelezo emininzi yokuhlamba / eyomileyo ngaphandle kokuphela, ukuqhekeka okanye ukwahlukana. Naluphi na uhlobo loyilo lunokwenziwa njengotshintsho lobushushu. Akukho sixhobo sebanga lezorhwebo siyafuneka kwinkqubo yesicelo, nje intsimbi yekhaya elula iya kwanela uninzi lweentlobo. Ukuhanjiswa okukhethekileyo, iiodolo eziphezulu zevolumu kunye nokusebenza ngokukhawuleza, kuyacetyiswa ukushicilela ubushushu kwezorhwebo.
Uzifaka njani iilebhile zokuDlulisa ubushushu?
● Ubushushu boGqithiso iithegi zempahla zinokusetyenziswa kusetyenziswa i-iron yekhaya okanye ishishini lokushicilela ubushushu.
● Isicelo siya kwahluka ngokuxhomekeke kubume belaphu kunye nodidi lweleyibheli yokuhambisa.
● Soloko ulandela abavelisi abasebenzisa imiyalelo.
Egqithileyo Iqhosha le-Orthodontic Lingual / iqhosha le-denim / iqhosha le-shank
Okulandelayo: Iphepha eliLinganisiweyo leTag
Ileyibhile ephothiweyo: ileyibhile ephambili, ileyibhile yobungakanani, ileyibheli yoKhathalelo ...
Metal snap iqhosha